Poortaalii:Saayinsii - Wikipedia
Saayinsiin (jecha Laatinii scientia jedhurraa kan dhufe, hiikaansaa "beekumsa") mala ittiin beekumsa waa'ee yuuniversii ijaaruu fi qindeessu yoo ta'u beekkumsi kunis ibsa yaalidhaan qoramuu danda'uu fi waan gara fuulduraa ta'uuf jiru dubbachuu danda'uu irratti hundaa'ee. Hiikaan kan durii garu kanatti kan dhiyaatu "saayinsii" qaama beekumsaa tokko, kan karaa namaa galuun ibsamuu danda'uu fi kan haala amansiisaa ta'een hojiirra oolchun danda'amudha. Namoonni saayinsii hojjatan saayintistii jedhamu.
Saayinsiin, ballifamee yoo ilaallame, bara ammayyaa dura ture, qarooma durii baayyee keessa ture. Garuu saayinsiin ammayyaa adeemsa isaatin adda waan ta'eef akkasumas bu'aa isaan waan milkaa'eef jecha saayinsii jedhu kan ammayyaa kun isa kanaan hiikkama. Bara ammayyaa dura, jijjiirramni guddaan kan biraa falaasamni uummamaa kan durii naannoo Giriikitti dhalachuu isaati.
Saayinsii Ummamaa Saayinsii Hawaasaa Herrega
Teeknooloojii Injineriingii Seenaa Saayinsii
Retrieved from "https://om.bywiki.com/w/index.php?title=Poortaalii:Saayinsii&oldid=27139"
This page was last edited on 3 Muddee 2014, at 18:08.